လိဒ်စတား ကယ်ဗင်ဖီးလစ် ပြောင်းရွေ့သွားနိုင်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်တန်းကလပ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ဒန်နီမေးလ် - SPORTS MYANMAR
By Edi Tor October 5, 2021
ညာနောက်ခံလူဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဒန်နီမေးလ်က ကယ်ဗင်ဖီးလစ် အနေနဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက် ကနေ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွေ့ သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပြီး အကြောင်းရင်း ကတော့ သရဲနီ တို့သာ ၎င်းကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ကမ်းလှမ်းလာခဲ့မယ် ဆိုရင် အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်လူ အနေနဲ့ ဒါကို ငြင်းပယ်နိုင်မှာ မဟုတ်တာကြောင့်လို့ သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။
ဖီးလစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရာသီ အတွင်း မာဆယ်လိုဘီယယ်ဆာရဲ့ လက်အောက်မှာ လိဒ်ရဲ့ အဓိက ကစားသမား အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Lily Whites တို့ကို ၂၀၀၃-၀၄ ဘောလုံးရာသီ နောက်ပိုင်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြန်လာနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် ကစားသမားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ဖီးလစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ ဆောက်ဂိတ်ရဲ့ အသင်းကို ဖိုင်နယ် တက်ရောက်နိုင်အောင် အကောင်းဆုံး ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
လာမည့် နွေရာသီမှာ ထိပ်တန်း ကွင်းလယ်လူ တစ်ဦး အားဖြည့်ဖို့ အတွက် ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ လိဒ်နဲ့ ကာလရှည် စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုသွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ဖီးလစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ လိဒ်နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ကြား ခါးသီးတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒန်နီမေးလ် ကတော့ ဖီးလစ်ဟာ Elland Road ကနေ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ပြောင်းရွေ့သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ ယူဆနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးလ်က “ကျွန်တော် ကတော့ ဖီးလစ် အနေနဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ options တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သူ Elland Road ကနေ ထွက်ခွာ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လိဒ်မှာ ကစားခဲ့တုန်းကလည်း ကစားသမား တစ်ချို့ဟာ ဒီလိုမျိုး လုပ်သွားခဲ့တာကို မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရီယိုဖာဒီနန်လည်း လိဒ်ကနေ ယူနိုက်တက်ကို ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရီယိုဟာ လိဒ်မှာ တစ်ရာသီသာ ကစားခဲ့တာပါ။
အလန်စမစ် တုန်းကလည်း လိဒ်ကနေ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ပရိတ်သတ်တွေ နားလည်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုက်တော့ မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ ဒါကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ ခါးသီးတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ရှိထားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ အံဝင်နိုင်မလား? သူ အဲဒီမှာ ပုံမှန် ကစားခွင့် ရမှာလား? လုံး၀ သံသယ ဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ သူဟာ မန်ယူနိုက်တက်ကို တိုးတက်စေမှာလား? အမှန်ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အင်္ဂလန် နောက်ခံလူဟောင်းက “လိဒ်ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ် တစ်ဦး အနေနဲ့ ဒါကို ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ကမ္ဘာကျော် အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ ဖီးလစ်ရဲ့ စာချုပ်သစ်မှာ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြောင်း ပါဝင်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူဟာ လိဒ်ရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ options တွေ ရှိမှသာ လိဒ်ကနေ ထွက်ခွာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်ဗင်ဖီးလစ်မှာ career တစ်ခုတည်း ရှိပါတယ်။ ခါးသီးပြိင်ဘက်တို့ ဘာတို့ကို ဖယ်ထားလိုက်ပါ။ အကယ်၍ သူ ထွက်ခွာချင်တယ် ဆိုရင် options တွေကို အရင် ကြည့်သွားရမှာပါ။ လိဒ်ပရိတ်သတ် တစ်ဦး ဖြစ်နေတာနဲ့ သစ္စာရှိချင်တာကြောင့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လျစ်လျူရှုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကစားသမား ဘဝဟာ တအားကို တိုတောင်းပါတယ်။ အသင်းကြီးတစ်သင်းမှာ ကစားခွင့် ရဖို့ ကလည်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ကမ်းလှမ်းမှု ရှိလာပြီ ဆိုရင် ဒါကို သေချာလက်ခံ စဉ်းစားသွားရမှာပါ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။